Huck's Harbour e-FunCity Burlington
I-united states Iowa
Indawo yokudlela yase-Indoor kanye ne-Outdoor Water Park
Phakathi kwezinto ezimnandi zokwenza ku-FunCity Burlington yiHuck's Harbour, i-park yamanzi yangaphakathi nangaphandle. Kungakhathaliseki isimo sezulu, wena nomndeni wakho ninganikeza izikhwama zakho zokugeza futhi nijabulele ama-slides namanzi neminye imisebenzi emanzi endaweni epaki yokuphatha ephethe isimo sezulu. Uma isimo sezulu sibambisana phakathi nezinyanga ezifudumele, ama-slides angaphandle kanye nokukhangisa akhulisa amathuba okusabalalisa.
Ngezindinganiso zamapaki zasendlini, iHuck's Harbour isincane kakhulu.
I-centralpiece echibini elingaphenduliwe elingaphakathi yindawo yokudlala amanzi ehlangene namapulisi, amaslayidi, nebheksi lokulahla. Ipaki inikeza ama-slides amabili amanzi, i-Tom's Twister ne-Red Rage, kanye nomfula omncane onobuhle, i-pool ehamba phambili, imisebenzi yezingane ezincane, ne-whirlpool.
Lapho ipaki yamanzi yangaphandle ivulekile, ukugibela kuyatholakala kufaka isitsha se-slide, umfula ovilaphayo, umzimba kanye nama-tube slides, ne-Kiddie City Jr., indawo yokudlala yamanzi yabantwana abancane. Kukhona futhi idiza elihambayo kanye nedamu lomsebenzi. Izakhiwo zasendlini noma zangaphandle azihlinzeki noma yiziphi ezikhangayo eziphezulu ezitholakala emapaki amanzi amakhulu anjengama-water coaster noma u- funnel ride . I-Huck's Harbour yindawo enhle yokufuna ukukhululeka ekushiseni kwehlobo noma ukuphumula okuvela ebumnyameni ebusika, noma kunjalo.
Izici ze-Water Park
Indlu: Amaslayidi amancane amancane, isakhiwo sokudlala samanzi ne-ibhuloho lokulahla, ibhuloho lomsebenzi, udonga olusenyukayo, umfula ovilaphayo, i-pool ehamba phambili, kanye neshubhu esishisayo.
Ngaphandle: Umfula ovilaphayo, ama-slides omzimba, i-tube slide, indawo yokusebenza yezingane ezincane, i-pool yokusebenza.
Ipaki ivulekele izivakashi zehhotela ezibhalisiwe kanye nomphakathi jikelele. Izindwendwe zehhotela eziseduze zithola ukungena mahhala eHuck's Harbour.
Izindlela Ezengeziwe Zokuzijabulisa Nge-FunCity
Amapaki amanzi ayingxenye yenkimbinkimbi ye-FunCity, efaka zonke izinhlobo zezinye izinto okufanele zizenze, kubandakanya:
Imigwaqo engu-24 e-bowling kuma-Kingpins.
I-go-karts kagesi yaminyaka yonke ku-25,000-square-foot-in-Zoom yangaphakathi.
I-lab ye-Lazertown ithegi ye-laser.
I-Sky Trail ne-Sky Tykes- yangaphakathi, isikhungo somsebenzi esiphezulu ne-amabhuloho wezintambo nezinye izinselelo.
Imidlalo engaphezu kwe-100 ye-Arcade, kuhlanganise namageyimu wesitayela sokuhlengwa nemiklomelo etholakalayo.
I-Ballocity, indawo yokudlala yasendlini ngamanoni, ama-vacuums, nazo zonke izinhlobo zezinye izindlela ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12 ukuqhuma ngamabhola e-foam.
I-Trax, igumbi leqembu lamalanga okuzalwa kanye nemicimbi ekhethekile.
Ukudla okunesisindo kuhlanganisa i-Boogaloo Cafe, indawo yokudlela egcwele, kanye nebhola lezemidlalo, i-full-service service e-Edgewater Grille, i-Club Car Lounge esebenza ngokusheshayo, ne-Gasoline Alley's, isidlo se-diner-style.
Hlala e-Pzazz Resort
I-Pzazz Resort eseduze nayo inikeza amakamelo ahlukahlukene, kufaka phakathi ama-suites omndeni, e-Pzazz Hotel naseCatfish Bend Inn. Izinsiza kanye nemisebenzi ihlanganisa i-Catfish Bend Casino nemishini yokudlala, imidlalo yokudlala, nezinye imidlalo, i-Spirit Hollow igalofu yegalofu, i-spa, isikhungo somcimbi nesithuba sokusebenza, kanye nezindawo zokudla eziningi.
I-FunCity isemgwaqweni weMigwaqo emikhulu 34 (Mt. Pleasant Street) noMgwaqo oMgwaqo 61 (Roosevelt Avenue) eBurlington kuMfula iMississippi.
I-Adventureland ne-Adventure Bay - E-Altoona, ipaki enkulu yokuzijabulisa e-Iowa nayo inikeza ipaki yamanzi angaphandle
Isiqhingi esilahlekile - Ipaki yamanzi yangaphandle enhle e-Waterloo
Amapaki amaningi ase-Iowa namapaki okuzijabulisa
Indawo yokudlela yase-King's Pointe Waterpark
I-Iowa City Gay Bars Guide - I-Iowa City Gay-Friendly Dining
I-Iowa City Gay Pride 2016
I-LGBT Umhlahlandlela we-Iowa City Gay Culture
5 Iowa RV Amapaki Okufanele Uvakashele
Ukwelashwa kwe-Spa Polish Body
5 Izici Zokuhleleka Okuhambayo Okuhamba Kokuzijabulisa
Izifunda zesikole sase-Montgomery County PA kanye nezikole K-12
Indlela Yokuhlangana Nabantu Njengomhambi WamaSolo
UMkhosi waseMelbourne weMidsumma 2018
Thenga i-Maple isiraphu kusuka eNew England
I-Baja California Ulwazi Oluyisisekelo
I-Texas Holiday Light Trails Yokugubha NgoDisemba
Indlela Yokusebenzisa Ibalazwe YaseParis City Street Map
Izindleko zomndeni ezihamba phambili zokuthatha ngoFebhuwari
I-Bars Engaphansi Kokudlela Nezindawo Zokudlela zase Las Vegas
Ebusika eMinneapolis naseSt. Paul
Isikhathi Sonyaka KaKhisimusi Imicimbi Nemikhuba e-Italy